Mpanao gazety Zimbaboeana sy mpanao politika mpanohitra roa nogadraina noho ny sioka momba ny habibiana nataon’ny polisy · Global Voices teny Malagasy
'Mbola manjaka hatrany ny tsimatimanota amin'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ao Zimbaboe'
Voadika ny 12 Febroary 2021 3:27 GMT
Polisy misava ny fahazoan-dalan'ny mpandeha alohan'ny hidirany ao anaty bisy. Takiana hitondra fahazoan-dalana manaporofo fa mpiasa tena ilaina ireo Zimbaboeana hatramin'ny nanambarana ny fihibohana COVID-19. Sary avy amin'ny KB Mpofu / ILO, Bulawayo, 20 Aprily 2020 (CC BY-NC-ND 2.0).
Voasambotra tamin'ny 8, 9, ary 11 Janoary tsirairay avy ilay mpanao gazety Hopewell Chin'ono sy mpanao politika mpanohitra miisa roa, Job Sikhala sy Fadzai Mahere, noho ny sioka momba ny habibiana nataon'ny polisy.
Nisioka momba ny tranga iray niseho tamina fiantsonan'ny taksy tany Harare, renivohitra, i Chin'ono, Sikhala ary Mahere izay nahitana polisy iray voalaza fa “namono nahafaty zaza iray raha teo am-pampiharana ny fepetran'ny COVID-19,” raha nibaby ilay zaza tao an-damosiny ilay renim-pianakaviana hoy ny gazety East African.
“Niparitaka be ny horonantsary nahitana ity tranga ity niaraka tamin'ilay renim-pianakaviana nitomany teo am-pitànana [ny] polisy iray izay voalaza fa nanao herisetra namono ho faty ny zanany,” hoy ny tatitra nataon'ny gazety Zimbabwe Observer.
Rehefa nosamborina i Chin'ono sy i Mahere dia samy nisioka momba ny nanjò azy avy izy ireo:
Milaza izy ireo fa miampanga ahy amin'ny fampitana lainga noho ny siokako fa nisy zaza nodarohina ary matin'ny polisy! Nentin'izy ireo tany amin'ny paositry ny polisy tany Harare aho.
Voasambotra. Tsy haharava ny herintsaiko na oviana na oviana ity fitondrana ity.
Mila mpitondra vaovao isika. ??
Nampandre ny besinimaro momba ny fitànana am-ponja miandry azy ihany koa i Sikhala:
Nahazo vaovao aho fa mikasa ny hisambotra ahy anio ny fitondrana Mnangagwa noho ny heloka izay tsy fantatro. Milaza izy ireo fa nanitsakitsaka ny fahefan'ny polisy aho tamin'ny fandefasako sioka momba ilay zaza voalaza fa nanaovan'izy ireo herisetra. Mampandre ny rehetra aho.
Taty aoriana dia nolavin'ny polisy ny filazana fa novonoina ilay zazakely, ary nanamafy izy ireo fa natao fizaham-pahasalamana ilay zaza ary tsy nisy ny ratra tokony hahafaty azy.
Voampanga tamin'ny famoahana na fampitana lainga manaratsy ny fanjakana izy telo ireo tamin'ny fanitsakitsahana ny Andininy faha 31(a)(iii) amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava, izay mivaky toy izao:
Ny olona rehetra, ao anatiny na ivelan'i Zimbaboe, mamoaka na mampita amin'ny olon-kafa fanambarana izay diso tanteraka na ara-materialy… hita fa tena atahorana na mety hanimba ny fitokisan'ny besinimaro ny mpitandro ny filaminana… na ny Fiarovam-pirenena ao Zimbabwe… na miteraka voka-dratsy voalaza (etsy ambony) na tsia ny famoaham-baovao na ny serasera, dia meloka amin'ny famoahana na fampitana fanambarana diso manoso-potaka ny fanjakana ary iharan'ny lamandy… na fampidirana am-ponja mandritra ny fotoana tsy mihoatra ny roapolo taona na izy roa.
Miatrika sazy 20 taona an-tranomaizina izy ireo, raha meloka.
Nomen'ny mpitsara tao Harare, Trynos Utahwashe fahafahana vonjimaika i Mahere rehefa nandoa onitra solofonja, ny 18 Janoary, rehefa avy nigadra fito andro tany am-ponja.
Nilaza ny mpandinin-draharaham-panjakana, Veritas fa tsy ara-dalàna ny fisamborana azy telo lahy ary tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny fiampangana azy ireo. “Nahoana ary izy telo ireo no voampanga ho nandika ny Andininy faha 31 (a)(iii), izay tsy ary tsy mbola lalàna manan-kery hatrizay?” hoy ny Veritas nanamafy.
“Tokony ho fantatra fa tsy hoe lasa tsy nanan-kery ilay andinin-dalàna rehefa nanambara izany ho foana ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa tsy nanan-kery mihitsy izany satria nandika ny lalàm-panorenana teo aloha; fanambarana tsotra momba ny zava-misy araka ny lalàna ny fanambaràn'ny fitsarana,” hoy i Veritas tao anaty fanambarana.
Milaza ny andininy faha-3 amin'ny lalàmpanorenana teo aloha fa “ny lalàmpanorenana no lalàna faratampon'i Zimbaboe, ary raha misy lalàna hafa tsy mifanaraka amin'ity lalàmpanorenana ity dia tokony hofoanana izany lalàna hafa izany raha tsy mifanaraka aminy.” Mitovy amin'izany tanteraka ny andininy fa 2 (1) amin'ny lalàmpanorenana ankehitriny. “Fa nahoana ary no voampanga ho mandika ny andininy faha-31 (a) (iii) izy telo ireo , izay lalàna tsy manan-kery sady tsy mbola nanankery hatrizay ?” Hoy ny Veritas.
Nolaniana tamin'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1980 ny lalàmpanorenan'i Zimbabwe taloha. Saingy, nankatoa ny lalàmpanorenana vaovao ho an'ny firenena ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ny 16 Martsa 2013.
Tsy nahazo fahafahana vonjimaika tamin'ny 14 Janoary i Chin'ono sy Sikhala. Samy mbola notanana vonjimaika any amin'ny paositry ny polisy izy roa, ao anatin'ny tahotra ny ho voan'ny COVID-19.
Mampametra-panontaniana ny fitànana mialoha ny fotoam-pitsarana, ny fanemorana ny fizotran'ny fitsarana sy ny fandavana ny fahafahana vonjimaika tsy misy fiampangana goavana, indrindra amin'ny fotoanan'ny #COVID19. Ambony ny tahan'ny fifindran'ny valan'aretina any am-ponja noho ny fahabetsahan'ny olona sy ny tsy fahampian'ny fahadiovana. Fantatsika izany satria manohana ny fonja izahay ao amin'ny @VSOZimbabwe pic.twitter.com/wvSPPmdZPe
Vakio koa: Confinement jusqu'à l’étouffement : comment les mesures anti-COVID19 ont débordé sur les droits numériques au Zimbabwe
Tsy vaovao amin'ny fonjan'i Zimbaboe i Chin'ono.
Tamin'ny 20 Jolay 2020 dia nosamborin'ny governemanta izy ary nampangaina ho nandrisika herisetra tamin'ny alàlan'ny sioka ho fanohanana ny hetsi-panoherana manohitra ny governemanta – fikasana noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 31 Jolay 2020. Nosamborina tamin'ny 21 Aogositra 2020 ny depiote mpanohitra Sikhala taty aoriana noho ny fanentanana io fihetsiketsehana io ihany. Voampanga ho nandrisika ny vahoaka hanao herisetra izy roa ireo. Nahazo fahafahana vonjimaika i Chin'ono sy Sikhala tamin'ny volana Septambra 2020.
‘Mbola manjaka hatrany ny tsimatimanota amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona’
Tamin'ny 19 Janoary 2021, nampitandrina ny amin'ny “tsimatimanota” izay mampiavaka ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Zimbabwe ny Iraky ny Vondrona Eropeana:
Roa taona aty aoriana, tsy ampy ny fanadihadiana ary mitohy hatrany ny tsimatimanota amin'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ao #Zimbaboe tamin'ny volana Janoary 2019.
Tamin'ny 17 Janoary 2019, nipoaka ny korontana nanerana ny firenena taorian'ny nanambaran'ny filoha Emmerson Mnangagwa ny fiakaran'ny vidin-tsolika tampoka amin'ny 150 isanjato, izay niteraka hetsi-panoherana nahery vaika andro maromaro. Araka ny Human Rights Watch, nahatratra 17 ny olona maty ary maro hafa no naratra sy nogadraina tsy ara-dalàna taorian'ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana hery tafahoatra mahafaty:
Nahafatesana Zimbaboeana miisa 17 ny famoretana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny volana Janoary 2019. Roa taona aty aoriana, mbola mitohy ny fitakianay ny tamberin'andraikitra sy ny hametrahan'ny governemanta ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena hahazoan'ny Zimbaboeana rehetra tombony
Niseho ny fanambaràn'ny Vondrona Eoropeana noho ny fisamborana hatrany ireo feo manohitra.
Na eo aza ny fiovan'ny miaramila mpiambina izay niafara tamin'ny fametraham-pialan'ny governemantan'Itompokolahy Robert Mugabe tamin'ny Novambra 2017, mbola nanatri-maso ny tranganà fanitsakitsahana lavareny ny zon'olombelona ny firenena. Nisy fiantraikany ratsy tamin'ny endrik'i Zimbaboe izany tamin'ny resaka fampiasam-bola tsara tany an-toerana.
Velom-panantenana tamin'ny toekarena tsaratsara kokoa sy ny fanajana ny zon'olombelona ny olom-pirenena rehefa naongana i Mugabe. Naharitra nitondra ela an'i Zimbaboe hatramin'ny taona 1980 tamin'ny tana-mahery izy.
Na izany aza, efa-taona taorian'ny fanonganam-panjakana, vao mainka niharatsy ny raharaha. Nitohy ny fanenjehana ny mpanohitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana, na amin'ny alàlan'ny fomba ara-dalàna na ivelan'ny lalàna.